ईपिएस सिस्टम दोषपुर्ण छ,डब्लुपिएस लागु हुनैपर्छ!
म जन्मेको देशमा परिवारको साथमै बसेर सपना पूरा गर्न सक्ने भए यति टाढाको देशमा आउने थिइन होला । जिविको पार्जनका लागि आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ छोडेर कोरियामा मजदुरी गरि जिउन बाध्य प्रवासी श्रमिक हुँ म ।कोरियामा प्रवासी श्रमिकको निम्ति लागु गरिएको इपियसमा कम्पनी स्वइच्छाले परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार छैन मलाई । सबै निर्णय मैले होइन कम्पनी मालिकले गर्छ ।
किन कि म कम्पनी सँग त्यस्तो सम्झौता गर्न बाध्य छु श्रम कानून अनुसार मैले सेवा सुबिधा पाउनु मेरो अधिकार हो । मलाई कम्पनीले पनि राम्रै व्यवहार गर्नुपर्छ । मजदुरी गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटनामा नपरी स्वस्थ्य भई जिउने अधिकार छ मलाई । तर कोरियामा ठिक बिपरित ब्यबहार गरिन्छ म माथी । सेवा सुबिधा र हक अधिकार माथी कुठाराघात गरिएको छ ।मजदुरी गर्ने क्रममा रोजगारदाताको लापरबाही (काम गर्दा सुरक्षा सम्बन्धि आवस्यक उपकरणको कमी) का कारण अकालमै ज्यान गुमाउन र अंग भंग हुन विवस छु म ।
दैनिक १६ घण्टा काम गरि महिनामा ३० दिन काम गरे बापत न्युनतम ज्याला समेत पाउदिन मैले । कोरियाली मजदुरले केही भएपनी मजदुर कानुनमा संरक्षण प्राप्त गरेको भए पनि मलाई कोरियामा मजदुरको दर्जाबाट कोषौं दुर दास बनाएर राखेको छ इपियसले । आफूमाथी भएको अन्यायको लागि न्याय माग्न सम्बन्धित निकायमा जाने हो भने उल्टो पीडितको कुरालाई भन्दा पिडकको कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ ।
विभिन्न झुटा आरोपमा सजाय पनि दिइन्छ कोरियामा मलाई । विदेशी भएकै कारण कार्य स्थलमा आफू भन्दा सानो उमेरको कोरियनले समेत होच्याएर हेर्छ मलाई । मेरो दैनिकी कार्यस्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली गलौच र दुव्र्यवहारको सामना गरेर सुरु हुन्छ । प्लास्टिकको घर, कन्टेनरमा मानिस बस्न सक्छ त्यो पनि लाखौ भाडा तिरेर ?तर पनि म ट्वाइलेट, बाथरुम, पानी नभएको र ४० डिग्री तापक्रम भएको थोत्रो कन्टेनर जस्को एउटा कोठामा चार चार जनाको दरले लाखबढी भाडा तिरेर बस्न विवस छु ।बर्षायाममा पानी भित्र पस्ने बोइलर बिनाको कोठाको लाखौं भाडा तिरेर बस्न बाध्य बनाइएको छ मलाई । काम गर्दै गर्दा कामको कारण वा अन्य कुनै कारण बिरामी भएपनि चुपचाप सहिबस्नु पर्छ । उपचार गर्न वा कामको कारणले भए कार्यस्थल परिवर्तन गर्न मिल्दैन । उल्टो काम गर्न मन नभए आफ्नो देश फिर्ता जान र होइन भने काम गर नभए गैरकानुनी बनाइदिन्छु भनि धम्की दिने गरिन्छ मलाई । कोरिया मा महिला दिदी बहिनी लाई कानुनमै पुर्ण अधिकार भए पनि म माथी भने कार्यस्थलमा हातपात र अभद्र व्यबहार गरिदा समेत ठूलै प्रमाण जुटाउनु पर्ने हुन्छ मैले ।
अवस्य पनि होइन कम्पनीलाई मेरो आवास्यकता परेको हो । तर म माथि कोरियामा जवर्जस्ती पसेको घुस पैठियाको जस्तो व्यबहार गरिन्छ । अपराधीक गतिविधि गर्ने अपराधी सोचिन्छ र खानै नपाएर आएको कंगाल जस्तो नजरले हेरिन्छ । रोजगारदातालाई मैले गधाले जस्तो काम गर्न सकिन, सधै उसको बफादार दास जस्तो भएर नजर झुकाइन र कम्मर भाच्चिने गरि ढोगिन भने राम्रो मानिदैन मलाई ।कार्य स्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली गलौच र अनेकन अभद्र व्यबहारको सामना गरिराखेको छु म ।
कोरियन नागरिकलाई ठेगना सोधेकै भरमा जेल जानु पर्छ मैले । तर कार्यस्थलमा म माथी कुटपिट, गाली गलौच, दुव्र्यवहार भैइरहँदा प्रमाणित गराउन गाह्रो हुन्छ । के म विदेशी भएकै कारण यसो भएको हो त ? कोरियामा मैले विभिद धार्मिक, जातिय, वर्णिय विभेदको सामना गर्नु परेको छ । मैले कोरियाको सार्वजनिक स्थानया सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्दा मलाई फरक दृस्टिकोणबाट हेर्ने गरिन्छ । म पनि अरु जस्तै मानिस अनि मजदुर हो ।अभद्र ब्यबहार गर्दा किन यसको विरुद्धमा कुरा उठाउन सक्दिन त म ? म कोरियन नागरिक नभएकै कारणले किन भेदभाव भोग्नु परेको होला ?
कोरियन सरकारले प्रवासी मजदुरको आवस्यकता परेर ल्याएको भए पनि किन दासको जस्तो ब्यबहार गर्छ ममाथि ।म स्वयमले मेरो अधिकारको बारेमा आवाज उठाइन भने अरु कसैले मेरो अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने वाला छैन । चुपलागेर बसेमा मेरो अधिकार प्राप्त हुनेवाला छैन । त्यसकारण मेरो अनि तपाईं हामी सबै प्रवासी मजदुरको हक अधिकारका निम्ति, आफू खुशी कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने नियम सहितको डब्लुपियसका लागि र प्रवासी मजदुर माथी गरिने विभिन्न भेदभाव अन्तका लागि दवाव शृजना गरौं ।मधुसुदन ओझा
सन २०२० मा कृषि क्षेत्रको लागी भाषा परीक्षा नहुने:
कोरियन भाषा पास भएर पनि पाँच हजार यूवा कोरिया जान पाएनन , भबिस्य अन्योलमा!